Six Sigma Vs. ITIL | Yikuphi okungcono Six sigma okanye i-ITIL? - ITS Tech School
Ziziphi ii-ITIL kunye ne-Six Sigma?
Ukwahlukana phakathi kwe-ITIL kunye ne-Six Sigma
Icandelo ngalinye lolawulo kubandakanya iteknoloji yolwazi ludinga ukuba iinkonzo azidluliselayo ziphezulu. Ukuqinisekisa ukuphathwa kolawulo oluphezulu, izicwangciso ezimbini zisetyenziswe ngokubanzi-I-IT Infrastructure Library (ITIL) kunye neSigma Six. Bobabini banamaphuzu abo anomdla. Kwimeko nayiphi na into, ininzi imibutho iyancika ekusebenziseni ababini kunye.
Kuya kuba yingcinga ecacileyo kubaqeqeshi be-IT ukufumana isatifikethi se-ITIL esiza kunika ukuqonda malunga nokusebenzisa i-ITIL ukudibanisa izibonelelo zayo neSigma Six. Nangona kunjalo ukuba bahluke, enye into ebalulekileyo malunga nabo kukugxininisa ekunyanisekeni kwabathengi. Sinike ithuba lokubabona ngokucacileyo apha.
I-ITIL isikhokelo esetyenziselwa ukuqinisa nokuhambisa iinkonzo ezisekelwe kwi-IT. Umboniso we-ITIL unamalungu amaninzi. Ulawulo lolawulo luquka ukuphathwa kotshintsho, ukuphathwa kolawulo, ukulawulwa kokukhutshwa, ukuphathwa kweziganeko kunye nokusekwa ulawulo. Ukuthunyelwa kolawulo kubandakanya ukulawula umda, ukulawula ukufikeleleka, ulawulo oluhambelana nemali, ulawulo lwezinga lokuxhamla kunye nokuphathwa kolawulo lokuqhubela phambili. Elinye lala macandelo linamacebo amiselweyo kunye nezenzo ezingafunyanwa ngokupheleleyo okanye ngokuzikhethela.
Six Sigma iyasetyenziswa ngokungekho ngaphandle kolawulo lwe-IT ngokutshintshwa kweenkqubo zokusebenza. Le ndlela ehlelekile yokuvavanya ukuba yeyiphi imfuneko ebalulekileyo kwishishini lakho, isebenzisa indlela yokuphucula iinkqubo kunye neziphumo zazo kunye nokulinganisa uhlobo lwesityalo kwiinkqubo. Idibanisa kakuhle nembono yolawulo lwe-IT kunye nokunikezela ukubaluleka kwiimali zotyalo-mali. Ukubaluleka phambili kunye nokunyaniseka kwabaxhasi bangabamalungu eSigma Six.
Kwimiqathango eqhelekileyo, i-ITIL kunye ne-Six Sigma ayisebenziswanga kunye ngokwenene. Yiba nokuba kunjalo, zisetyenziswe njengenxalenye yokudibanisa njengelungiselelo elongezelelweyo lweendlela zokuphucula ishishini kwizinga eliphezulu.
I-Sigma yesithandathu inxalenye enkulu kwinani lokubala, iifomula kunye nophando lweefom zoshishino ukuze ziphuculwe. Igxininisa kwindlela efanelekileyo yokuphucula iifomu, i-ITIL izithintelo ezininzi kunye neengcinga kunye nemithetho efunekayo ukufumanisa "yintoni" yeenkqubo.
Bona kwakho :Umbuzo wesampuli kunye nezimpendulo ze-ITIL Exam 2017
Amasu e-ITIL anceda amabhizinisi ukuba afumane oko kufuneka ukuba kwenziwe ukwenzela ukuphucula ifom. Nangona kunokulindeleke, iSigma Six isebenza ngamashishini ukuba anqume isizathu sokuba umbandela okanye apho inkqubo yenzeke kakubi. Ngelo xesha ufumanisa indlela oku kungagqitywa ngayo. Yenza indlela yokulinganisa iinkonzo ngokucacileyo. Ekubeni i-Six Sigma isebenzisa uphando olulinganiswayo, kukulungele ukuzama ukulungiselela ukulungiswa kwimiqathango yokuhlola ukuba ngaba iimeko ezinokuzilungelelanisa.
Enyanisweni, nangaloo mahlulo, ezi ndlela zombini xa zidibene zibonelela ngeyona nto inomdla. I-ITIL inquma okokumele kwenziwe kwintlangano nangayiphi na imeko, kungekhona. Ngaloo ndlela, abaqeqeshi be-IT kwintlangano kufuneka badinge isigqibo somsebenzi kwaye benze izikhokelo zomsebenzi ngokucacileyo ngokwabo. Ngokufanayo, iS Sig Sigma icebisa indlela yokufumanisa umqhubi oyintloko wemicimbi kunye nendlela anokuhlaziywa ngayo. Ngokuthi "yintoni" kunye "nendlela" yokuguqulwa kwexabiso, isigqibo sobini kunye kunye nokwenza inkxaso kunye nokuthunyelwa kwe-IT.
I-Six Sigma ingasetyenziselwa njengenxalenye yenguqu yenkqubo ekhoyo yangoku ekhoyo njengamanje isebenzisa isiseko se-ITIL okanye ngokufudukela kuyo. Ngethuba elihle lokuba kusekuhlaleni, umbutho unokusebenzisa indlela yokwephula ingozi, ukufumanisa oko kufuneka kwenziwe ukwenzela ukuba inkqubo ye-ITIL-ibe yinto enhle kwaye emva koko kusetshenziswe ityala lezo shishino ukuba lichaze indlela eliza kutshintshwa ngayo I-ITIL epheleleyo.
Njengoko zombini iindlela ze-ITIL kunye ne-Six Sigma ziyimfuneko ekufezekiseni ishishini, ukuya kuqeqesho lwe-ITIL kunye ne-Six Sigma kuya kubonisa ukuba luncedo olongezelelweyo. Iingcali zithemba ukuba oku kunika ukufunda ukufunda i-Six Sigma ukunikezela inkqubo enhle ye-ITIL ekuhambeni kokuvisisana neenjongo zoshishino zombutho.
Bona kwakho: I-ITIL yeSatifikethi seMisebenzi yeMisebenzi